सरकारी कार्यालयका टेलिफोन ‘दिदीको अफिस केटिएम’ को नाममा दर्ता ! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
सरकारी कार्यालयका टेलिफोन ‘दिदीको अफिस केटिएम’ को नाममा दर्ता !
प्रकाशित मिति : शनिबार, जेष्ठ २०, २०७४
काठमाडौं, २० जेठ – अधिकांश सरकारी कार्यालयका टेलिफोन नम्बर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन् । विश्वास नलाग्न सक्ला तर राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि मन्त्रालय र विभागका फोन नम्बर अरु नै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयको बेवसाइटमा राखिएका फोन नम्बरमध्ये एउटा एसएमटी विद्यादेवी भण्डारी अर्को नेपाल राष्ट्रपति भवन श्री रामवरण यादव र अरु नम्बरहरु खेमचन्द्र ढकाल, दिनेश शर्मा र समिरको नाममा दर्ता छन् । त्यस्तै, उपराष्ट्रपति कार्यालयको टेलिफोन नारायण कुँवर सर, झा भिपि जी को नाममा दर्ता भएका छन् ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एक टेलिफोन नम्बर दिदीको अफिस केटिएमको नाममा दर्ता छ । मन्त्रालयको ०१४२११६९८ नम्बर ‘दिदीको अफिस केटिएम’ मा दर्ता भएको भेटिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय लगायतका सरकारी कार्यालयहरुको नम्बर ट्रु कलरमा खोजी गर्दा यस्तो विश्वास नै नलाग्ने नतिजा प्राप्त भएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयको टेलिफोन इन्टरकम सिस्टममा राखिएको ०१४४४६००७ नम्बर खेमचन्द्र ढकालको नाममा देखाउने गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रपति कार्यालयकै अर्को नम्बर ०१४४४६००८ एसएमटी विद्यादेवी भण्डारी, ०१४४४६००९ नम्बर नेपाल राष्ट्रपति भवन श्री रामवरण यादव काठमाडौँ देखाउने गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यलयकै सूचना तथा जनसम्पर्क अन्तरगतको ०१४४४६०१० टेलिफोन नम्बर दिनेश शर्मा र राष्ट्रपति निवासको कार्यालयको टेलिफोन नम्बर ०१४४१८५०४ समिरको नाममा देखाउने गरेको छ ।
नेपाल शान्ति स्काउटको मिट एण्ड ग्रिट कार्यक्रम सम्पन्न
जहाज एउटाकाे बेच्ने अर्कै, नक्कली कम्पनी खडा गरेर यसरी भ्रम सिर्जना गरियाे
बाबुआमालाई घर निकाला गर्ने छोराछोरीलाई जेल सजाय हुने !
मन्त्रीमाथि प्रधानमन्त्रीको निगरानी, अनलाईनबाटै कामको अनुगमन